Tay Than Thar Data Pack တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူတိုင်း မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်မည့် ဒေတာ ရရှိမည့်အပြင် Tay Than Thar Application ထဲမှာလဲ နာမည်ကြီးအဆိုတော်များရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ အမိုက်စားသီချင်းတွေကို နားထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tay Than Thar Data Pack ကို နှစ်မျိုးရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(၇) ရက် Tay Than Thar Data Pack
(၃၀) ရက် Tay Than Than Data Pack
ခေါ်ဆိုဝယ်ယူရန် *8070*7# *8070*30#
အထူးအစီအစဉ် Tay Than Thar premium services access
Tay Than Thar Pack တွင် ပါဝင်သောအစီအစဉ်များ
နာမည်ကြီးအဆိုတော်များရဲ့ သီချင်းသစ်များကို ဦးဦးဖျားဖျား နားဆင်နိုင်ခွင့်
အမျိုးအစား စုံလင်လှတဲ့ သီချင်းကောင်းများစွာကို တစ်နေရာထဲမှာ နားထောင်နိုင်ခြင်း
ဝယ်ယူရရှိထားသော ဒေတာကို မိမိ စိတ်ကြိုက် အင်တာနက်အတွက် အသုံးပြုခွင့်
Tay Than That Data Pack ဝယ်ယူပုံ အဆင့်ဆင့်
အဆင့် (၁) – USSD Code နံပါတ် *8070# ကို နှိပ်ပါ။ (သို့မဟုတ်) 7Days Data Pack အတွက် *8070*7# (သို့မဟုတ်) 30Days Data Pack အတွက် *8070*30# ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၂) – ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Package ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးပါက ၀ယ်ယူထားသောဒေတာ နှင့်တကွ Tay Than Thar Application တွင် ဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ရန်အတွက် Link ကို SMS မှတစ်ဆင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃) ပေးပို့သော SMS ထဲရှိ Link မှတစ်ဆင့် Tay Than Thar Application သို့ ဝင်ရောက်ကာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာအဆိုတော်များရဲ့Exclusiveသီချင်းအသစ်တွေကို သီးသန့်ဦးဦးဖျားဖျား နားဆင်ခံစားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
MPT4U မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူခြင်း
အဆင့် (၂) ထို့နောက် Tay Than Thar Data Pack ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးပါက ၀ယ်ယူထားသော ဒေတာ နှင့်တကွ Tay Than Thar Application ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Link ကို SMS မှတစ်ဆင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃) ပေးပို့သော SMS ထဲရှိ Link မှတစ်ဆင့် Tay Than Thar Application သို့ ဝင်ရောက်ကာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာအဆိုတော်များရဲ့Exclusive သီချင်းအသစ်တွေကို သီးသန့်ဦးဦးဖျားဖျား နားဆင်ခံစားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
MPT သုံးစွဲသူများသည် Tay Than Thar Data Pack ကို တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူလျှင် ဒေတာပမာဏ 225MB (ခုနှစ်ရက်စာ) သို့မဟုတ် 335 MB (ရက် ၃၀ စာ) နှင့် ဝယ်ယူထားသည့် ဒေတာ သက်တမ်းနှင့် ညီမျှသည့် Tay Than Thar service code တစ်ခု ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Tay Than Thar Data Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်သတ်မရှိ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ အသစ်ထပ်မံဝယ်ယူလိုက်သော Tay Than Thar Data Pack မှ ဒေတာများနှင့် လက်ကျန်ရှိနေသော Tay Than Thar ပတ်ကေ့ချ် ဒေတာ ပမာဏများကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဝယ်ယူထားသော ပတ်ကေ့ချ်သတ်တမ်းအတွင်း သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၁။ Tay Than Thar Data Pack ဆိုတာ ဘာလဲ?
Tay Than Thar Data Pack ဆိုတာ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည့်ဒေတာများ ရရှိမယ့်အပြင် Tay Than Thar Application ထဲရှိ နာမည်ကြီး အဆိုတော်များရဲ့ Exclusiveသီချင်းအသစ်တွေကိုလဲ ဦးဦးဖျားဖျားနားဆင်နိုင်မယ့် Data Pack ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Tay Than Thar Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်ခု ရှိပါသလဲ? သက်တမ်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
Tay Than Thar Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။
၇ ရက်အတွင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သုံးနိုင်သော ဒေတာ 225 MB နှင့် Tay Than Thar Application မှာ ၇ ရက် Premium သီချင်းများ နားဆင်ခွင့် = ၅၄၉ ကျပ် (အခွန် ၁၅% နှုန်းပါဝင်ပြီး)
ရက် ၃၀အတွင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သုံးနိုင်သော ဒေတာ 335 MB နှင့် Tay Than Thar Application မှာ ရက် ၃၀ Premium သီချင်းများ နားဆင်ခွင့် = ၉၈၉ ကျပ် (အခွန် ၁၅% နှုန်းပါဝင်ပြီး)
၃။ Tay Than Thar Data Pack ကို ဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ?
Tay Than Thar Data Pack ကို ဝယ်ယူရန်အတွက် အောက်ပါအဆင့်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
၄။ Tay Than Thar Data Pack ဝယ်ယူပြီးနောက် Tay Than Thar မှာ သီချင်းနားဆင်ဖို့ အခကြေးငွေ ပေးရဦးမှာလား။
ဝယ်ယူရရှိထားသော Tay Than Thar Data Pack ရဲ့သတ်မှတ်ရက်အတွင်း နားဆင်နိုင်မယ် ဖြစ်ပြီး ထပ်ဆောင်းပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။ဒေတာအတွက်လဲ Tay Than Thar Data Pack မှ ဝယ်ယူရရှိထားသော ဒေတာများကို ဦးစွာဖြတ်တောက်သွားမယ် ဖြစ်ပြီး ဒေတာများ ကုန်ဆုံးသွားပါက အခြားဝယ်ယူထားသာ Data Pack (သို့မဟုတ်)သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ Tay Than Thar Application များထဲရှိ သီချင်းနားဆင်ရန် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာရှိပါသလား?
အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။
၆။ Tay Than Thar Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အကြိမ်အကန့်အသတ် ရှိပါသလား?
Tay Than Thar Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အကြိမ်အကန့်အသတ် မရှိပါ။ စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ Tay Than Thar Data Packတစ်ခုထက် ပို၍ ဝယ်ယူမည် ဆိုပါက ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းသည် ပေါင်းစည်းသွားမှာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူရရှိထားသော Pack များ၏ စုစုပေါင်း ဒေတာပမာဏကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းကာလကတော့ နောက်ဆုံးဝယ်ယူထားသော Pack ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံး ရက်အတိုင်း သတ်မှတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၇။ Tay Than Thar Data Quota 225 MB (သို့မဟုတ်) 335 MB ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက် သီချင်းများ ဆက်လက်နားဆင်နိုင်ပါသလား?
သီချင်းနားဆင်ခွင့် သက်တမ်းကျန်ရှိပါက နားဆင်နိုင်မယ်ဖြစ်ပြီး Tay Than Thar Data Pack မှ ဝယ်ယူရရှိထားသော ဒေတာများ ကုန်ဆုံးသွားပါကလဲ အခြားဝယ်ယူထားသာ Data Pack (သို့မဟုတ်)သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၈။ Tay Than Thar Application ကို ဘယ်လို Download ရယူနိုင်လဲ။
Tay Than Thar Application ကို Android ဖုန်းများအတွက် Google Play Store ၊ iOS ဖုန်းများအတွက် Apple Store တွင် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
၉။ ရရှိထားသော Link ဖြင့် Tay Than Thar Application ထဲသို့ ဝင်ရောက်၍မရပါ။ ဘယ်လိုပြုလုပ်ရပါမလဲ?
ပထမဦးစွာ Tay Than Thar Application တို့ကိုဖုန်းထဲတွင် ဒေါင်းလုတ် လုပ်ကာ ထည့်သွင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ Tay Than Thar Data Pack ကို ဝယ်ယူပြီးနောက် အောက်ပါအချက်များကို ပြုလုပ်ပါ။
အဆင့် (၂) သီချင်းနားဆင်ရန် Open Tay Than Thar ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၄) Ok ကို နှိပ်၍ Tay Than Thar Application သို့ ဝင်ရောက်ပါ။
Tay Than Thar Application နှင့် Tay Than Thar Data Pack ရယူခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက Tay Than Thar Facebook Pageနှင့် ဖုန်း ၀၉ ၈၉၃၈၉၄၈၉၅ ကို ၂၄ နာရီ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။